Louis van Gaal Oo Doonayay In Uu Man United Keeno Mats Hummels & Thomas Muller Intii Uu Tababaraha U Ahaa United & Sababihii Ay U Dhamaystiri Waayeen Heshiisyada – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Louis van Gaal Oo Doonayay In Uu Man United Keeno Mats Hummels & Thomas Muller Intii Uu Tababaraha U Ahaa United & Sababihii Ay U Dhamaystiri Waayeen Heshiisyada
Louis van Gaal Oo Doonayay In Uu Man United Keeno Mats Hummels & Thomas Muller Intii Uu Tababaraha U Ahaa United & Sababihii Ay U Dhamaystiri Waayeen Heshiisyada
Tababarihii hore ee kooxda Man United ee Louis van Gaal ayaa shaaca ka qaaday in Manchester United ay seegtay saxiixa Mats Hummels iyo Thomas Muller intii uu joogay Old Trafford.
Tababaraha reer Holland oo laba sano tababare u ahaa kooxda Man United intii u dhexaysay 2014 ilaa 2016 ayaa sku dayay inuu la soo wareego xiddigaha Bayern Munich iyo xulka qaranka Germany.
Van Gaal ayaa laab sano ku qaatay kooxda Bayern Munich intii u dhexaysay 2009 ilaa 2011 waxana si weyn uag xumaaday go,aankii tababarihii ka horeeyay ee Jurgen Klinsmann uu daafaca Hummels ugu ogolaaday in uu ka tago Bayern Munich kuna biiro kooxda Borussia Dortmund.
Van Gaal ayaa sidoo kale la soo shaqeeyay aabaha dhalay daafaca wakhtigii uu ahaa tababaraha da,yarka ka hor intii uuna dhiman Hummels aabihii.
Daafaca Hummels oo jooga kooxda Borussia Dortmund ayaa si weyn loola xiriirinayay Old Trafford sanadkii 2014 hadana mar kale lala xiriirinayay 2015 ka hor inta ayna maamulka Reds dareenkooda u jeedin daafaca sergio Ramos.
Hummels ayaa ugu dambayn dib ugu laabtay kooxda Bayern Munich sanadkii 2016, Mullers ayaa muhiim ka ahaa kooxda Bayern Munich markii uu Joogay Van Gaal waxana uu doonayay in uu mar kale kula midoobo Man United sanadkii 2015.
United ayaa ka gudbisay dalab 85 milyan ah xiddiga reer Germany laakiin waxa loo sheegay in ayna jirin fursad ay ku heli karaan xiddiga.
“Waxa aan doonayay in aan Man united keeno Hummels”Van Gaal ayaa sidaasi u sheegay Sport Bild “Laakiin wakhtigaas waxa uu ku jiray qaab ciyaareed xun lamaanan soo saxiixan ugu dambayntii”.
“Waan xaqiijin karaa inaan doonayay Muller, laakiin ma jirto wax aan sameyn karnay, Bayern waxay cad u sheegtay in ayna iibineynin.”